Asparagus Meyer: incazelo, izithombe, izici kulinywe ekhaya
Uma dream of esimila engavamile zokuhlobisa ekhaya, asparagus ngokugcwele lezi zidingo. Yini kudingeka siqaphe ukuba nemithetho, kanjani ukuze asakaze izitshalo futhi uthole real engadini ukuphila endlini, imuphi kule zezitshalo ekahle nokunakekelwa efulethini? Zonke lezi mibuzo isithakazelo amateur balimi, njengoba impahla okulungiselelwe kuyoba usizo hhayi kuphela kulabo kakade enesixwayiso kwi ifasitela sill asparagus Meyer, kodwa futhi kulabo uqala ukuzwa lesi sitshalo, kodwa ufuna ukuba uthole.
Ubude emhlabeni ezishisa kakhulu zikhipha izinhlayiyana kunamasonto angaba amakhulu amathathu zama-asparagus, zehlukene ukubukeka. Lezi zitshalo atholakala kuwo wonke amazwekazi ngaphandle Antarctica, njengoba ingashintshwa ukuze sisinde kule sezulu sihluke asezindaweni ezishisayo kuya eyihlanze.
Ezinye izinhlobo zama-lesi sitshalo adliwayo, wena nakanjani ngizwe ngabo, kodwa igama yabo asparagus. Amanye amakhambi, njenge-asparagus Meyer asetshenziswa njengoba izitshalo Ornamental, wanda ngezinga a sill iwindi. Ngokuthakazelisayo, amagatsha ukuncishiselwa kusuka sezihlahla akuyona kulahliwe, futhi lisetshenziswa njengendlela umsizi isixha ezimibalabala noma ilungiselelo ezimibalabala.
Esikhathini ukulima endlini kukhona izinhlobonhlobo ezivamile: Meyer, gustotsvetkovy, feathery, izidakamizwa, ucezu asparagus. Ukuze amabhodwe nge izimbali isehlane izindawo ezinkulu isikhala, lapho ayengase ngokuthula ukuhlangana nabanye izitshalo.
Iningi bale zinhlobo, kuhlanganise asparagus Meyer, ukunakekelwa linesizotha, kodwa ukubukeka umxhwele futhi uvumelane ngokuvumelanayo yokuphila ezindaweni eziphakathi nezwe.
izitshalo inkomba Botanical
Asparagus - nomele ejwayelekile omkhaya asparagus isitshalo. imbali Hairy sifanamsindvo avamise ukubizwa ngokuthi amaqabunga, kodwa zibukeke ayefana xaxa imisila Fluffy izilwane kwendle. Isikhathi zezimbali nezihlahla siluhlaza yemifino uwela ehlobo. Florets kuhluke obugagu: inflorescence elincane nombala omhlophe nge elikhanyayo, kodwa iphunga elimnandi. Ngokuthakazelisayo, lapho okuqukethwe izimo kuma, lezi zitshalo eziqhakaza kakhulu kuyaqabukela.
Emva zom kwakhiwa izithelo ezincane obomvu, berry-like, ngaphakathi imbewu ezinkulu ezimnyama.
Lokusakaza senzeka ngezindlela eziningana: imbewu, cuttings, uhlukanisa esihlahleni.
Kwehlukanisa ehlathini kuyinto elula nokusakaza asparagus Meyer. Ezikhula imbewu - more isikhathi esiningi, kodwa inqubo bezijabulisa yayilula. Zokuhlwanyela zokutshala impahla ekhiqizwa ngoJanuwari-February, usebenzisa izimbali noma amabhokisi amancane. Ngokwenza inqubo enjalo, qaphela ukuthi elingenhla isigubungelo ungqimba imbewu emhlabathini usuke hhayi womile. Ukuze wenze lokhu, ungakha yokufakelwa mini-abamba ukushisa, esehlanganise ifilimu esitsheni, ingilazi noma esikhwameni plastic. Amahlumela zokuqala avele izinsuku 30-60, kuye ngokuthi imbewu ukutholakala kanye lokushisa, ngokuvamile okubonisa ukuhluma okuhle.
Ngezinye izikhathi asetshenziswa indlela esiphelweni, okuyinto ubambile kusukela ekuqaleni March kuya ku-June. Cuttings bafa futhi ibekwe emanzini. izinsuku 30-45, lapho kumiswa amahlumela impande, asparagus kungenziwa itshalwe.
Asparagus Meyer kuyinto ejabulisa kakhulu ihlanganisa egumbini sasivumela ovuthayo ebusika ezingeni lokushisa hhayi ngaphansana 14-15 degrees. Ehlobo lesi sitshalo kakhulu ukugcina emoyeni evulekile, obeka imbiza nge imbali ethunzini esinqunyiwe.
Ehlobo, udinga ukuqapha ezingeni umswakama in the ebhodweni. Ikhaya esekhulile asparagus, ukunamathela le mithetho:
ungavumeli omiswe umhlabathi ebhodweni ehlobo;
ebusika inisele isitshalo kanye ngenyanga, yayigcinwe endaweni izimo hot njalo uma kunesidingo;
Sishaye izitshalo umqhele - imfuneko ukukhula obunobunye kanye nokuthuthukiswa izitshalo; inqubo enjalo kufanele ilandelwe okungenani izikhathi 2 ngesonto;
ukuze eyayenziwe ukudala eyengeziwe air umswakama, ufaka izimbali potted Pallets noma isekela uhlalwane;
Zama ukusingatha izindlela ezikhethekile ngokumelene izinambuzane nezifo asparagus;
ukwenza Umanyolo kabili ngenyanga: yezimbiwa noma organic (kungaba rotated).
Nikeza ukunakekelwa asparagus ekhaya. Izithombe bambonise indlela enhle kungaba isitshalo enempilo, okuyinto sinakekelwe.
NeMibandela wokuqukethwe umbala ukhululekile ekhaya
Kusukela imvelo zasendlini kuncike ngqo imbali isimo kulo lonke umjikelezo wokuphila. Ngoba kubalulekile ngakho ukuqinisekisa lokushisa elikhulu, umswakama kanye ukukhanyisa efulethini noma indlu, equkethe asparagus.
Lesi sitshalo ukuthandwa eziningi ukukhanya, kodwa kuphela lapho ngingekho ovulekile. Imbali ngokuphelele avumelane nemibandela ku penumbra. Cishe zonke izinhlobo, ngaphandle asparagus Sprenger, kumele avikelwe elangeni ukugwema okweqile kokukhwehlela izinaliti zalesi sihlahla.
Ngezinye ngokulinganisela lokushisa asparagus ubonisa izimpawu elilungile kubalulekile. Ngenxa imibuso esifundeni 21-25 degrees ehlobo 16-19 degrees ebusika afaneleka kakhulu ekukhuleni kwesihlahla nasekuvezeni.
Amanzi futhi umswakama
Ehlobo ikakhulukazi ukuqaphelisisa ukuthi kunjani asparagus Meyer. Ukunisela kufanele kube ehlelekile futhi uchichima, umswakama angami: izwe kumelwe yome out, kodwa musa jikisa itshe. Ebusika aqukethe isitshalo endaweni epholile, inciphise ukuthambisa, kodwa watch out for ezingeni kome inhlabathi in the ebhodweni.
Asparagus uthanda cool "eshaweni", ikakhulukazi ebusika lapho Ukushisa lapho kangaka ukuntuleka umswakama emoyeni. Periodic le nqubo ngeke kuyilimaze imbali.
Ukunisela nokugcina ezingeni nomswakama egumbini - iphuzu elibalulekile yokutshala izitshalo endlini. Ibonisa inattention imbali, uzobona iqala kanjani ukuze ome bese ephenduka abe phuzi.
Kabusha izitshalo ezisencane ngonyaka eyenziwa kubenze ebhodweni elikhulu. Lo isidingo kusukela ekwandeni okusheshayo abasha isitshalo izimpande. amabhodwe Old ungayithola enye njalo ezinyangeni 24. Inqubo yokutholwa ukuqhuba entwasahlobo.
Rejuvenate isitshalo abatshali ukuncoma ukususa nezilimo eziyizigaxa ephansi, azisetshenziswa kumiswa oluhlaza. Inqubo wenziwa zonke izinhlobo asparagus, ngaphandle feathery.
Efaka umquba njalo eyenziwa kusukela ngo-March kuya September, zonke izinsuku 10-15. Ebusika, zalisa izitshalo kumisiwe.
Izifo kanye izinambuzane
Asparagus hit isikali izinambuzane, thrips, yizimbuzane, ngokumelene kuyo okudingekile ukuqeda ngokushesha.
Uma isitshalo iphendula aphuzi futhi iqala ukuze ome, kuba lesibonakaliso sokuqala ukuthi udinga ukuqinisekisa ukunakekelwa kahle asparagus ekhaya.
Izithombe zalesi sitshalo ukumangala emangalisa nge okwakhe yabo. Futhi asparagus endlini Ubamba iso hhayi kuphela abanikazi, kodwa futhi izivakashi zibabaza amakhono akho e floriculture. Sanquma ukuba sikhule asparagus endlini Meyer? Incazelo kukusiza sikhule izihlahlana enkulu futhi unempilo, ngokuvumelanayo ngokugcwele ingaphakathi endlini.
Indlela yokutshala Persimmon umsuka indaba
Maranta tricolor ( "umthandazo isitshalo") - imithetho lokunakekela ekhaya
Cotoneaster ovundlile izithelo bright red
Kalanchoe - ukunakekelwa ekhaya netimphawu kabusha
Metro station "saseNevsky Prospekt"
Biopolymer ezindebeni nemiphumela Izibuyekezo
Izitshalo Aquarium pontederievolistnaya Cryptocoryne: incazelo, ukugcinwa, ukuzalaniswa kwamahhashi kanye nokubuyekeza
I-Helminthiasis: izimpawu ezinganeni nakubantu abadala
Drathaar inja zohlobo: incazelo zohlobo kanye nokubuyekeza
"Ndodakazi uKaputeni sika": uwuchaze. A izibonelo ezisemqoka ukuze asekele emfushane "Ndodakazi uKaputeni sika" by isahluko
Gada ASUS rog Swift PG278Q: izici, uhlobo-matrix, ukubuyekezwa
Umtholampilo "Isimo" (Dmitrov): incazelo, amasevisi, oxhumana nabo kanye nokubuyekeza